Shakespeare's Macbeth. Evhangeri muhukama hwaBanquo naMacbeth | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Vanyori, Mabhuku, Theater
Mufananidzo wekavha: (c) Rafael Mir. Ndatenda, Master Mir.
Mazuva mashoma apfuura ndanga ndichiongorora yakaisvonaka vhezheni ye Macbeth naJo Nesbø. Ini ndataura nezve a rondedzero yezvinyorwa zvandakaita mumazuva angu ekoreji e mudzidzi waF Inglesa izvo zviri pachena zvaisanganisira kudzidza kwebasa re Shakespeare. Yakasimbiswa Macbeth seni zita rinodiwa uye yakaratidza izvo muzuva rayo zvakanyanya kundikwezva kune iyi yakasarudzika: hushamwari pakati pe protagonist nemutungamiriri wake Banquo uye nemabatirwo ainoita. Uye ndezvekuti, pamwe kupfuura Macbeth kana Lady Macbeth, ndakafarira Banquo pamusoro pezvose uye zvakare hunhu hwa McDuff.
Ini ndakakwanisa kununura rondedzero iyoyo mukutsvaga kwekutsvaga kunotyisa pakati pezviuru zvakachengetedzwa mapepa. Iyo yekutanga, zvakare pachena, yaive muSaxon iyo yandakadudzira. Nekudaro, nemitsara yemudzidzi inozvininipisa yakanyorwa makore anopfuura makumi maviri apfuura, ndinovimba kuunza iri basa risingafi zvishoma padhuze kuvaverengi.
2.1 1. Kuita kwaBanquo panguva yekusangana kwekutanga nevaroyi
2.2 2. Iko kudonha kunogona kuitika kweBanquo kune kuyedzwa kwechiporofita
2.3 3. Zvikonzero Macbeth anofunga kuti anofanira kuuraya Banquo
Iko kushanduka muhukama hwevatambi vaviri ava ndechimwe chezvinhu zvakakosha pakutanga kwenjodzi yeMacbeth, zvisineyi nezvechinangwa chemunhu mukuru. Zvese zvinhu mhedzisiro yakatorwa kubva ku Vaporofita vatatu vevaroyi uye kushungurudzika kwaMacbeth kupesana navo kuti hazvikonzerwe nekutenda mashura, asi nechishuwo icho chinomuendesa kune akawanda akazotevera zviito zvakaipa.
Macbeth anokanganisa chokwadi chekuti zviporofita zviviri izvi zvave zvechokwadi nekuti izvo zvinoita kuti afunge nezvesimba rake rekuwana izvo zvaari kuda achishandisa nzira dzake. Saka iyo kuvimbika, pfungwa yakakosha muhupenyu hwaMacbeth, kuna mambo Duncan uye shamwari dzake, mune iyi kesi, ku bhenji, inonyangarika zvachose. Macbeth inoshatiswa uye anotyora mhiko dzake dzese, orega kuvimba nemunhu wese, kazhinji kunyangwe iye.
Zvisinei, izvi ndezvekushanduka mune izvo hushamwari hwaMacbeth naBanquo kubva pakuona kwechipiri, kunyangwe ari Macbeth anoityora, nekuda kwake uye kutya, nekuuraya shamwari yake.
Maumbirwo enhamo yeMacbeth iri nyore kwazvo. Hukuru hwe protagonist hwakatosimbiswa: anoedzwa, anowira mumuedzo iwoyo uye anoparadzwa nawo. Chinhu chimwe chete ichocho chingadai chakaitika kuna Banquo. Kuvimbika kwake kuna Macbeth uye hushamwari hwake zvaigona kunge zvakamutungamira munzira imwechete, kutodarika shamwari yake. kana akateerera kana kutevera zviporofita yevaroyi pavana vake, vanozove madzimambo, asi kwete iye.
Izvo zvinogona kunzwisiswa kuti kugona uku kwechigaro chehushe kunoita kuti iwe ufunge nezvazvo, asi Banquo haite nekuti iye anoziva kuti chero muyedzo unogona kudzoka uye kuzvitengesa. Nekudaro, iye anobatsira Macbeth muzvinangwa zvake nekugara achigara padivi pake. Saka, Hunhu hukuru hwaBanquo kuvimbika mune zvakanaka nezvakaipa, kunyangwe hazvo pane imwe nguva achinyunyuta nezvazvo uye ane godo nezveramangwana raMacbeth.
Asi kuti uone kukura kwehunhu hwaBanquo, unofanirwa kuteedzera mamwe mapoinzi:
1. Kuita kwaBanquo panguva yekusangana kwekutanga nevaroyi
Asati asangana navo Macbeth naBanquo vese vakashanda kunze. Yakave yakaratidza ushingi uye kudada muhondo neuto ramambo weNorway uye nekudaro inosvika munzeve dzaMambo Duncan, uyo anosarudza kupa mubayiro Macbeth nezita remumwe wevakakundwa.
Asi zvino, pakudzoka kubva kuhondo, Banquo ndiye wekutanga ndiani anoona Varoyi obvunza kuti ndivanaani asina kuvaratidza hapana kutya. Nekudaro, Varoyi vanongopindura nekurumbidza uye mashura kuna Macbeth, uyo anosara asina kutaura kana izwi uye akamirira. Kunzwa izvo, Banquo achiri kutya uye, chii chimwe, anobvunza sei vasina kuporofitwa kwaari anokudza saMacbeth uye anoda mhinduro, achiratidza nezwi remashoko ake kuti haatyi.
... Ini handikumbire zvakanaka zvavo kana ruvengo rwavo, asi handivatye.
Ikoko kunoonekwa kuti kusiyana nekunyarara kweMacbeth, Banquo kwete kufadzwa Nemashoko iwayo anoshamisa, anobvunza mazwi evaroyi. Ivo vanokupa mhinduro isiri yakanakira iyo yazvino, asi yenguva yemberi.
Pasina kukura kupfuura Macbeth uye akakura kupfuura iye!
Asina kufara zvakadaro asi zvakadaro anofara zvikuru!
Uye saka zvichave nekuti ichave yakakura kupfuura Macbeth nekuda kwekuvimbika uku uye chiremerera. Uye kunyangwe achizouraiwa, kufa kwake hakuzove kwakaipa sokwaMacbeth. Zvakare, kufanotaura kwekuve iye mubereki wemutsara wenhaka kuchigaro cheushe kuchazadziswa nemwanakomana wake Kutiza. Naizvozvo, kunyangwe akafa, Banquo achave nerombo rakanaka.
Saka apo varoyi pavanoenda uye Macbeth anosara achifunga nezve izvo zvaitika uye achishuvira kuti dai akaudzwa chimwe chinhu, shamwari mbiri idzi dzinoshamisika nezvavakaona nekunzwa. Ivo vane yekutanga kutaurirana umo ivo vanotaura nezve izvo zvichave kwavari. Iyi ndiyo nhanho yekutanga kune yako kuparadzaniswa mune ramangwana. Nekuti kunyangwe ichingori kutaura nezve zvakaitika, ivo vanozoziva gare gare zvazvinoreva chaizvo.
2. Iko kudonha kunogona kuitika kweBanquo kune kuyedzwa kwechiporofita
Ndichimuzivisa nezvekugadzwa kwake saBaron weGlamis naCawdor, maviri echiporofita chevaroyi, Macbeth akapofumadzwa nechishuwo chekuwana korona, sezvo izvo zvisina kuporofitwa kwaari, uye haazorega kufunga nezvake. Banquo achazongotaura nezve mamiriro epfungwa aanoona kushamwari yake kubva panguva iyoyo achimuudza izvozvo inogara ichitevera. Macbeth, achiona izvozvo, anosarudza kutaura naye gare gare kana zvese zvanyatsojeka uye kudzikama.
Kubva ipapo kusvika kuurayiwa kwaMambo Duncan munhare yaMacbeth pane nhanho imwe chete, kunyangwe kusagadzikana kwekusagadzikana, kunoda kushinga kwemukadzi wake, Mukadzi Macbeth, Kupara mhosva. Pakutanga, apo Macbeth ari kufungisisa nezvekutengesa kwake, ane imwe hurukuro pfupi naBanquo, uyo aripo mukambani yemwanakomana wake Fleance. Macbeth anodzokorora kuti kana vawana nguva, vachataura nezve zviporofita zvakare. Banquo anobvumirana, achidzokorora kuna Macbeth kuti ari mubasa rake uye anoramba akavimbika kuna mambo.
Asi havachataura zvakare uye kuurawa kwamambo mumaoko aMacbeth kucharamba kwakavanzika kune wese munhu. Saka Banquo ndiye wekutanga waunoda kujekesa zvikonzero zvekufa ikoko uye tsvaga chero chingangoita rangano. Iwo mazwi achaita kuti Macbeth avhunduke nekumutya.
Zvisinei, Banquo inotangawo kufungidzira Macbeth, kana awana korona uye otonga nemukadzi wake. Izvi zvinoratidzwa mu pfupi monologue iyo inotungamira nzvimbo yekutanga yechiito chechitatu. Banquo anoreva mashandisiro anoita Macbeth zvese izvo zviporofita zvakaziviswa kwaari, asi anotya kuti nzira dzeshamwari yake dzinopomera uye dzinotungamirwa nekutengesa uye kuda chinzvimbo. Uye anoshamisika zvakare, sekusangana nevaroyi, nezvekubudirira kwaMacbeth kwete kwake.
… Sei vasingafanire kuve chirevo kwandiri uye nekundipa tariro?
Pano banquo ichiripo inochengetedza chivimbo chekuti izvo zvakaziviswa kwaari zvichazadzikiswa uye zvinochengetedza kuvimbika kwake ikozvino kuMacbeth samambo wavo. Asi, zvakare sezvakaita Macbeth, Banquo aigona kuve akafunga nezve imwecheteyo yekutengesa shamwari yake nekuda kwekusanzwisisa kumwechete kweropafadzo dzaMacbeth. Zvisinei, maitiro ake haapfuuri mberi. Chete anonyunyuta yeMacbeth yakashata kutamba kutora korona nesimba.
3. Zvikonzero Macbeth anofunga kuti anofanira kuuraya Banquo
Ndipo Macbeth paanonzwa munjodzi. Iye zvino ndiye mambo, asi ari zvakare kuziva nzira yaakazviita nayo uye anotanga kuvimba nechinhu, saka zvirokwazvo iye waanotya zvakanyanya ndiBanquo.
Zvese izvi zvinoonekwa zvakajeka mu macbeth monologue muchiitiko chekutanga chechiito chechitatu. Macbeth anoziva nezvekutendeka kwaBanquo uye mafungiro ake akarurama anoita kuti aite nechivimbo chikuru maari. Aya ndiwo mazwi:
Hazvibatsiri kuva nemasimba nenzira iyi; chengetedzo inofanira kundiperekedza zvakanyanya. Kusava nechokwadi kwangu paBanquo kunowedzera; uye zviri chaizvo mukudzora hunhu hwake izvo zvinogona kutyiwa kwaari; zvizhinji ndizvo zvaanotsunga; uye hasha dzisingadzimiki dzepfungwa dzake dzinoperekedza pfungwa dzinotungamira kushinga kwake kuti azviratidze nehungwaru. Hapana mumwe kunze kwake anondityisidzira […].
Naizvozvo, Macbeth anoona Banquo sekutyisidzira kukuru mukutonga kwake. Kunyanya zvakadaro kana achifunga kumashure kuzviporofita izvo, kunyangwe achimupa korona uye nekukurumidza simba, kunewo mubairo waBanquo asi unogara kwenguva refu sababa verudzi rwehumambo iye asina kuudzwa nezvenyaya iyoyo. Saka Macbeth anoziva kuti kana izvozvo zvikaitika imhaka yekuti akabatsira kuti zviitike, nekuve ine chigaro chekusiyira kuvanakomana vaBanquo, nekuda kwekuora kwake.
[…] Ini ndakanganisa mweya wangu kune vazukuru vaBanquo […].
Naizvozvo inofanira kutema neakabvaNdiri kureva, anofanirwa kuuraya Banquo uye, zveshuwa, nemwanakomana wake Kutiza. Macbeth achaita saizvozvo, asi nevamwe vanorova kune avo vanonyepa kuvaudza kuti Banquo muvengi wavo. Kana Banquo achiri mupenyu, Macbeth nehumambo hwake havazove vakachengeteka zvachose.
Banquo anopondwa, asi kwete mwanakomana wake. Chiporofita chicha zadziswa uye ipapo nhamo ichatanga kuna Macbeth. Izvi zvinoitika munzvimbo yechina yechiito chechitatu, apo pamabiko aMacbeth anoziviswa nezvekufa kwaBanquo uye kutiza kwaFleance, saka anonetseka zvakare kusvika kumagumo anosiririsa.
Muchiitiko ichi Mweya waBanquo unozviratidza kwaari, uyo anofamba akagara pachigaro cheushe sechiratidzo chekuti vana vavo munguva pfupi iri kutevera ndivo vanozozvitora. Ndicho chinokonzera iyo kutanga kwekupenga kwaMacbeth. Kune dzimwe nyanzvi dzebasa mweya uyu uyo ​​waanoona chete ndiko kuratidzwa kwekutya uye kutya kweMacbeth.
Tinogona kutsvaga chechitatu chinova icho simba Banquo angangodaro aive naro paMacbeth. Ivo vari pamwe chete nguva dzese, uye kunyangwe Banquo achiramba akatendeka kumisimboti yake anovavigawo kuna Macbeth, nekuti haana chokwadi nekupondwa kwaMambo Duncan mumaoko ake kuti atore chigaro. Uye, saMacbeth, anofungawo nezve zviporofita. Naizvozvo, Kana shamwari yake ikasawana chigaro, haazove baba vemadzimambo futi, saka anosarudza kusiya zvinhu sezvazviri.. Zvisinei, zvinokwanisika kuti aigona kuve akakurudzira zviito zvaMacbeth.
Muchidimbu, iyo shanduko yeshamwari iyi inoratidzwa ne zviporofita, zvake destino uye nemusiyano mukuru mukukosha kweiyo ambition kune yega yega mavara.
Nezve iyo illustrator Rafa Mir zvese pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Bvunzo » Shakespeare's Macbeth. Evhangeri muhukama hwaBanquo naMacbeth